Isdiiwaangelinta Dugsiga - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Tallaabada ugu horreysa ee hannaanka isqorista waxay ka dhacdaa onlayn iyadoo loo sii marayo nidaamka Isdiiwaangelinta Onlaynka ah ee Kambaska. Isticmaal mid ka mid ah botoonnada soo socda ee isdiiwaangelinta kahor si aad u dhammaystirto tallaabada ugu horreysa hannaanka isqorista. Hubi inaad dibu-eegto DHAMMAAN macluumaadka ku qoran boggan kahor intaadan bilaabin hannaanka ka horreeya isdiiwaangelinta ee ilmahaaga.
Isdiiwaangelinta ee ilmahaaga
Tallaabada Koowaad- Hel aagga dugsi dhigashada ee ilmahaaga
Tallaabada Labaad- Isdiiwaangelinta hore ee onlaynka
Tallaabada Saddexaad- Liiska hubinta ee K-12 iyo dhammaystirka isdiiwaangelinta hore
Tallaabada Afaraad- Dibu-eeg macluumaadka dheeraadka ah
Isticmaal qalabka goob sheegaha aagga dugsi dhigashada ama wac 651-423-7640 si aad u heshid aagga dugsi dhigasho ee ilmahaaga.
Haddii aad rabto inaad iska diiwaangeliso dugsi kale oo aan ahayn dugsiga xaafaddaada, isticmaal ilaha hoose.
Ka beddelitaanka hal dugsi ilaa dugsi kale ee Degmada 196
Ka beddelitaanka hal dugsi ilaa dugsi kale ee Degmada 196 (beddel gudaha degmada ah) waxaa ku jira beddellada ku saleysan:
Waalidiinta doonaya inay beddelaan degganaanshaha:
Arday bilow ah ama sare oo doonaya inuu joogo dugsiga markay waalidkoodu guuraan, iyo
Doorashada waalidiinta ee dugsi kale.
Dibu-eeg Mudnaantayada imaanshaha ee Ardayda Beddelka ah macluumaad intaa ka badan.
Dhigashada dugsiga Degmada 196 haddii aan ku noolahay meel ka baxsan degmada
502.2P Mudnaanta Dhigashada ee Ardayda Beddelka ah waxay siisaa sharraxaad ku saabsan hannaanka furan ee isqorista.
Codsiyada Isqorista Furan si aad u dhigato dugsi ka duwan Dugsiga Degmada Minnesota oo aan ahayn midka aad ku nooshahay waxa la filayaa Janaayo 15 ee sannad-dugsiyeedka soo socda.
Dhigashada dugsiga soo-jiidashada ee Degmada 196
Waxaannu siinnaa doorashooyin badan oo wanaagsan ilmahaaga — oo ay ku jiraan shan dugsi hoose, mid dhexe iyo laba barnaamij soo-jiidasho oo ah dugsiga sare. Dugsiga soo-jiidashadu wuxuu leeyahay deegaan waxbarasho oo ku saleysan isku-dhafnaan. Isku-dhafnaantan waxay abuurtaa sida fasallada wax loo baro oo loo muujiyo.
Wax badan ka baro oo ku saabsan isqorista iyo codsiyada dugsiga soo-jiidashada >
Fadlan ogsoonow, buuxinta foomkan ka horreeya isdiiwaangelintu maaha tallaabadaada ugu dambeysa.
Loogu talogalay qoysaska hadda ee Degmada 196
TILMAAMAHA LOOGU TALOGALAY GELITAANKA ISDIIWAANGELINTA HORE EE QOYSASKA HADDA EE DEGMADA 196
ISDIIWAANGELINTA HORE EE K-12 (HADDA JIRTA)
Qoysaska marka ugu horreysa ee aan lahayn carruur ka diiwaangashan Degmada 196
DIIWAANGELINTA HORE EE K-12 (CUSUB)
Kadib buuxinta isdiiwaangelinta hore ee onlaynka ah dugsiga ilmahaaga ayaa kula soo xiriiri doona si ay kuugu dejiyaan waqti aad ug keento walxahan soo socda dugsiga oo aad u buuxiso isdiiwaangelinta K-12:
Shahaadada dhalashada, baasaboor ama caddayn kale oo ah da’ada ilmahaaga
Nuqul ah diiwaanka tallaalka ilmahaaga ee hadda, ka dhaafitaan caafimaad ama diidmo xilkasnimo
Xog-ururinta Luqadda ee Minnesota oo dhammaystiran
Caddaynta baarista carruurnimada hore haddii aan ilmahaaga lagu baadhin Degmada 196.
Haddii ilmahaagu uusan ku jirin habka baaritaanka, fadlan booqo boggayaga baaritaanka carruurnimada hore oo wac 651-423-7899 si aad u samaysatid ballan.
Emayl ahaan macluumaadka daryeelka ilmaha ee sannad-dugsiyeedka, haddii la dabaqi karo, oo ay ku jiraan magaca, cinwaanka iyo taleefan lambarka daryeel-bixiyaha ilmahaaga oo loogu talogalay ujeedooyin gaadiid.
MACLUUMAADKA KALE SI AAD U BUUXISO ISDIIWAANGALINTA HORE
Codsiga qadada bilaashka ah ama qiimaha jaban (Codsiyada waxaa loo baahan yahay in dib loo cusbooneysiiyo sannad kasta.
Diidmada Sii-deynta Hagaha iyo foomka Macluumaadka Buugga Sannadka
Buug-gacmeedka Xuquuqaha iyo Masuuliyadaha Ardayga
Kahor- iyo kadib dugsiga daryeelka ilmaha
Waxbarashada Bulshadu waxay bixisaa daryeelka ilmaha iyadoo u sii maraysa Barnaamijka YMCA SAC. Waxbarashada Bulshadu waxaa kale oo ay bixiyaan ECFE iyo barnaamijyo beri-biyood oo ah dad waaweyn, carruur, oo kala duwan.
Ilmaha uqalma xaddaanada haddii isagu ama iyadu ay noqon doonto 5 sanno jir ama kahor Sebtembar 1 ee sannadka isaga ama iyadu ay bilaabi doonaan dugsiga. Tilmaamaha soo gelitaanka hore ayay heli karaan waalidiinta doonaya inay qoraan ardayda aan buuxin shuruudaha da’ada. Waalidiintu waxa kale oo ay wici karaan 651-423-7739 macluumaad intaa ka badan oo ku saabsan soo gelitaanka xaddaanada.
Minnesota waxay u baahan tahay in dhammaan carruurtu buuxiyaan baaritaan bilaash ah si loo ogaado wax walwal ah oo ku saabsan koboca iyo caafimaadka kahor soo gelitaanka xaddaanada ee dugsiga dawladda. Degmada 196 waxay dhiirigelinaysaa baaritaanka carruurnimada hore ee u dhaxaysa saddex iyo afar sanno jirka. Tani waxay oggolaanaysaa waayo aragnimada dugsiga ama fursadaha kale ee bulsho/waxbarasho si uu uga faa’iideysto ilmuhu. Fadlan kala xiriir Baaritaanka Carruurnimada Hore halkan 651-423-7899 macluumaad intaa ka badan.
Ka baro wax badan oo ku saabsan Xaddaanada halkan Degmada 196 >
Ciyaaraha jireed iyo u-qalmitaanka
Ka dhigo mid la heli karo si aannu u isticmaali karno inaanu hubino in ilmahaagu ka qaybqaadan karo waxqabadyada dugsiga, ama haddii ay u baahan yihiin meelayn gaar ah oo ku saleysan baahiyahooda, sidaa waynnu ku siin karnaa iyaga inta ugu badan ee awooddeenna ah.
Ardayda dugsiyada sare, buuxi Foomka Caddaynta Imtixaanka Jireed ee Uqalmitaanka Ciyaaraha ee MSHSL iyo Su’aalaha Caafimaadka Ciyaaraha ee Sannadlaha ah.
Ardayda dugsiga dhexe, buuxi Foomka Caddaynta Imtixaanka Jireed ee Uqalmitaanka Ciyaaraha ee MSHSL
Baska waxaa la siiyaa ardayda ku nool 1 mayl iyo wixii ka fog laga bilaabo dugsiga ee ardayda dugsiga hoose iyo 1.5 mayl iyo wixii ka fog ardayda dugsiga dhexe iyo sare. Shuruudahan adeegga masaafada waxa kale oo ay khuseeyaan ardayda dhiganaysa dugsiyada soo-jiidashada ee degmada iyo dhammaan dugsiyada aan dawladda ahayn.
Booqo Bogga Waaxda Gaadiidka macluumaad intaa ka badan ama wac 651-423-7685.
Xogta tirokoobka ayaa loo baahan yahay si loo qoro ilmahaaga Degmada 186. Waxay sidoo kale caawisaa hubinta tirada saxda ah ee degganayaasha degmada taas oo loo isticmaalo in lagu saadaaliyo koritaanka dhigashada dugsiga ee mustaqbalka iyo macluumaadka xuduudda.
Haddii aa qabto su’aalo ku saabsan foomka tirokoobka ama xogta la codsaday, kala xiriir Kormeeraha Macluumaadka Ardayga Kim Reis halkan Kim.Reis@district196.org.
Mudnaanta Dhigashada ee Ardayda Beddelka ah
Macluumadka Tirakoobka Ardayda
Codsiga Beddelka Ardayga ee Gudaha Degmada (Wuxu furmayaa Diisambar 15)
Foomka Ikhtiyaarrada Isqorista ee Gobolka (Loogu talogalay ardayda ku nool Degmada 196; Wuxu furmayaa Janaayo 15
Daryeelka Maalinta ee loogu talogalay Ardayda ku jirta Fasallada K-5